Qumane iyo Qaawane (part 5) | SSC TIMES
SSC TIMES » News, Qosol iyo Qiiro » Qumane iyo Qaawane (part 5)
Qumane iyo Qaawane (part 5)
Qumane: Saaxiib maanta sibaad u yara qashuucsantahay oo shaahiiba waa kaa degi la’yahaye maxaa jira? Wejigaa marka aan arko waxaa ii muuqda in aad meel fog ku maqantahay.
Qaawane: Waa runtaa maanta lama mid aha maalmaha qaarkood. Arimo waxaa jira mararka qaarkood, marka aad maqashid ama aad aragtid, kugu abuura shucuur aanad garanayn in ay xanaaq ku sal leedahay ama dareenka ah ‘maxaa iga galay’! Hadaba maanta xaaldu waa sidaa, oo arimahan maskaxdayda yar ku dul wareegaya ayaan meel aan u saaro garanayn.
Qumane: Waxaa ay ila tahay saaxiib mar hadii aad tiri arin baa maskaxdayda ku dul wareegaysa, waan garanayaa halka aad diiradda ku haysid,il’leen Soomalida ayaa tiraahda “nin aad taqaanid, yaa tahay lama yiraahdo”. Marka saaxiib arintaa yay kuwareerinee soo daa, kolay anaad xawaash iigu siidaraysaayee, oo aad isleedahay, dhegaha si wanaagsan ha ugu furto, oo yaanu, sheeko kale soo dhexgelin.
Qaawane: IL’leen dad isyaqaan ismaqiyaamaan. Si wanaagsan ayaad ii fahamtay ee bal si wanaagsan ii dhagayso. Laba arimood ayaan doonayaa in aan maanta kaaga waramo: Ta u horaysaa waxaa ay ku saabsantahay ‘riwaayadii aqoon raadiska’ ee bishii dhawayd ee 26kii Juun laga dhigay Hargaysa iyo nawaaxigeeda. Arintaa bal in yar aan kaaga waramo. Dad badan ayaa arintaa fahamsanayn oo aad ka midtahay saaxiib. Igama aha arintaa dhaleeco in aad maskaxda ka hurudid ee waa riwaayad si habsami ah loo soo abaabulay oo indha sarcaad yari kujiro. Marka arintaa riwaayadda oo dhan ka hadli mayo ee waxaan doonayaa in aan qayb kamid ah aan kuu bidhaamiyo.
Qumane: Sababta aad in yar aad iiga bidhaaminaysid maxay tahay oo aanad iigu dhamaystiraynin?
Qaawane: Weligaa su’aal aan loo joogin ayaad sheekada dhabaq ku soo siisaa. Hadaan ‘riwaayadda aqoon raadiska’ dhamaanteed kaaga waramo, kursigan ka kicimayno ilaa iyo waaberiga, ee saaxiib maanta inyar aan kuu taabto ee iga dhuux.
Qumane: Waa arin meesha ku jirta. Waayahaye warka soo daa.
Intii aanu sheekada bilaabin ayaa nin Soomaali ah oo yaqaan Qaawane ku soo dhaqaaqay markii uu arkay in uu beerta fadhiyo. Halkii buu ku salaamay labadii saaxiib oo uu reerihii iyo eheladii ka waraystay. Salaantii ka dib ninkii halkii buu ku macsalaameeyey odayadii meesha fadhiyey, markii ay tuseen in yar oo luqada jirka ah, in ay doonayaan in ay kaligood ahaadaan, in ay doonayaan.
Qaawane: Halkee ayaan maraynay? Haa! Arintii riwaayadda. Waa taad ka warhaysid intii aanay riwaayadda dhicin in dadkii jilayey ay safarro ku soo kala bixiyeen wadamada Europe iyo Carabaha il’leen waa qaxooti haysta baasabooro qalaadeede. Sababta ay safaradan ugu soo bexeena waxaa ay ahayd in ay lac’agtii ay ku jili lahaayeen ay u yabooh tagaan. Jilayaashaa ayaa laba nooc ah; mid ku xiran xawaaladlayda iyo danyarta qaxootiga qayb ka mid ah oo qurba jog ah, iyo mid ku xiran keliya dan’yarta qaxootiga kunool Ingriiska, maraykanka iyo wadamada kale ee Europe . Hadaba su’aashu waxaa weeye dadkan kunool wadamada dibedda maxaa ka khuseeya ‘riwaayadda aqoon raadiska’ oo ay jilayaasha lacagtoodii loo siiyey sadaqada in ay caruurtooda ku koriyaan oo aanay ku bakhtiyin dhulkan caddaanka, ugu yaboohayaan? Saaxiib bal su’aashaa ka war’ran oo maxay kula tahay?
Qumane: Saaxiib ma maqlijirtay hadaladii ku jiray heestii Soomaaliyeed …”Wa su’aal da’waynoo, madaxa daalinaysee..” marka saaxiib madaxa ha’iga daalin ee sheekada halkaa ka wad.
Qaawane: Waayahay. Hadaba aan kuu sharaxo; jilayaashu waxaa ay ku takhasuseen sida dadka loo qiyaamadeeyo, maxaayeelay qofka Soomaaliyeed marka uu isku magacaabo siyaasibaan ahay, waxaa uu ula jeedaa sida aan kuu khiyaamo ayaan bartay oo aan khabiir ku ahay. Taa micnaheeda waxaa weeye, been quluubtaada ka farxisa ayaan kuu sheegayaa, adna isii waxaa aan doonayo, taas oo ah lacag. Marka beenta laga iibinayo dadwaynaha qurba joogta waxaa ay ku salaysantahay haddii ay riwaayaddan si wanaagsan u hirgasho, aqoonsigii meel fogba laga doonimaayo ee wixii aad hagbadda ku gasheen nagu soo wareejiya. Arinta kale oo u baahan in lamagacaabo waxaa weeye Jilayaashane waxaa ay u shaqeeyaan sida wadaadada “New Ages” ee ummaddii mareekanga oo aqoon gaabta ahayd hantidoodii si farsamaysan ugala wareegay, oo ay dadkii ka dhaadhiciyeen in ay cudurada haya ka daawaynayaan janadiina wadadii loo marilahaa ku toosinaya. Marka saaxiib ta kale ee ka sii naxdinta badan waxaa weeye jilayaasha qarkood waxaa ayba caadaysteen in ay nacayb ku kala dhexabuuraan Ummadda walaalaha ah ee Soomaaliyeed. Mid ka mid ah jilayaasha dooni mayo in aan magacaabo, ayaaba caadaystay in uu fekradii hogaamiyaha British National Partiga iyada oo sideedii ah ku dhabaqo siyaasadiisa. Waa arin laga naxo. Marka arintaa iyada ah yaan ku dheeran, nasiib wanaag jilihii sidaa ahaa waxaa uu noqday markii riwaayaddi dhamaatay, ninkii ugu sabciska yaraa, inkastuu weli ku doodo in uu soo xiri doono xuduudka.
Qumane: War saaxiib il’leen adaaba war haya. Ismaan lahay saaxiibka arimaha Soomaaliyeed waa uu udhuun duleelaa! Waxaan moodi jiray in aad siyaasadaha reer galbeedka keliya aqoon dheeraad ah u leedahay. Waayahaye taa fahmay ee arinta kale ee aad iiga warami lahayd ee maskaxdaada daalisay bal soo gudbi.
Qaawane: Arinta kale waxaa weeye..(intii uusan sheekadii dhex gelin ayuu waxaa uu arkay ninkii Soomaaliyeed oo dhinacooda u soo dhaqaaqay. Markaas ayuu Qaawane yiri) Waxaan umalaynayaa saaxiib in aan sheekadeena ka dhigano usbuuca danbe, waatan nalasoo dhexgalaye. As’salaamu Calaykum! War Jaamac soo fariiso ee inoo warran?
Sheekada halkaa kala soco….
Filed under: News, Qosol iyo Qiiro · Tags: sheeko story